Nextcloud Taura, yemahara uye yakazvimiririra mukwikwidzi kuWhatsApp | Linux Vakapindwa muropa
Nextcloud Taura, yemahara uye yakazvimiririra kukwikwidza kuWhatsApp
Cloud uye akawanda mapuratifomu mashandisirwo ave echimambokadzi software yehupenyu hwedu, zvisinei, mazhinji eaya mafomu haasi edu pachedu asi ndeemakambani akazvimirira uye kazhinji anotora kana kuyera edu ega data.
Kupesana neizvi, maSeva eLinux uye Mahara Software kunyoreswa zvinomisikidzwa seyakavanzika yega uye yakachengeteka mhinduro yedata redu neruzivo rwepachivande. Munguva pfupi yapfuura kambani inotarisira Nextcloud yakatanga InoteveraCloud Kutaura, basa rekutumira mameseji rinoti rinokwikwidza Facebook maGoogle Hangouts, Apple Facetime, uye WhatsApp.
Nextcloud Kutaura ndeye Android uye iOS mobile app iyo inoshandisa Nextcloud tekinoroji kushanda. Izvi zvinoreva kuti kune rumwe rutivi nTichada yedu yega kana yakavanzika server kwatinogona kuisa Nextcloud uye nekubatanidza iyo Nextcloud Talk sevhisi uye kune rimwe divi tichava neapp inoshanda nechero chishandiso uye iyo inogona kubatanidzwa kune chero hurukuro ine hukama ne Nextcloud, iyo hurukuro kwete mushandisi.
Nextcloud Talk inoda server yakavanzika kuti ishande nemazvo
Sezvo Nextcloud iri software yatinogona kuisa pane yedu pachedu server kana kushandisa masevhisi ekambani, sezvazviri zvino kuitika neWordPress, Nextcloud Talk kuchengetedzwa uye kuvanzika kunovimbiswa. Nekudaro, iyi software ichiri pane beta hwaro. Nextcloud Kutaura kunofanirwa kuve nekushandisa Nextcloud 13, vhezheni iri beta mamiriro, saka iko kushanda uye mashandiro anogona kunge achine dambudziko.
Chero zvazvingaitika, Nextcloud Talk inotibvumidza kuti titaure takanangana nechero mushandisi, wedzera vashandisi pakutendeuka kana kutaura kune Server Administrator. Iyo inotibvumidza isu kuwedzera uye kutumira chero faira uye hurukuro tinogona kunyora kana kuita musangano wevhidhiyo. Iwo mafaira ekushandisa mafaira akachengetwa paSextcloud server kuitira kuti data redu rive rakachengeteka uye rinogona kungo shandiswa ne server server.
Kushandiswa kwe Nextcloud mumakambani uye maseva epamba akawedzera neanomwe; zvakakodzera, pakati pezvimwe zvinhu, kune nyore kushandisa, chengetedzo yainopa uye pamusoro pezvese zvakavanzika zvainopa zvichienzaniswa nedzimwe mhinduro dzakafanana. Izvo ndezve izvi zvese kuti kuvhurwa kweNextcloud Talk kunonakidza, kuve imwe nzira chaiyo kune WhatsApp, Facetime neGoogle Hangouts Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Nextcloud Taura, yemahara uye yakazvimiririra kukwikwidza kuWhatsApp
Kana mumwe munhu achida kushandisa yemahara uye yakazvimiririra kukwikwidza kuWhatsApp, chandinokurudzira ndechekuti vashandise Jabber, iri yemahara, yemahara, pamusoro pekuve nenharaunda hombe uye makore mazhinji ebudiriro.
Yakanaka kwazvo chirongwa, nekuti makambani mazhinji anoshandisa data redu. Kwaziso.
BlankOn: A Debian-based Indonesian Distribution
Maitiro ekusetazve Wordpress password kubva kuMySQL